Ịghọrọ Ọka n’Ụbọchị Izu Ike | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
NDỊ NA-ESO ỤZỌ JIZỌS GHỌỌRỌ ỌKA N’ỤBỌCHỊ IZU IKE
JIZỌS BỤ “ONYENWE ỤBỌCHỊ IZU IKE”
Ugbu a, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gawara Galili nke dị n’ebe ugwu. Ọ bụ oge opupu ihe ubi, e nwekwara ọka ndị dị n’ubi. Ndị na-eso ụzọ Jizọs ghọọrọ ọka na-ata n’ihi na agụụ na-agụ ha. Ma, ụbọchị a ha na-eme ihe a bụ Ụbọchị Izu Ike, ndị Farisii hụkwara ihe ahụ ha na-eme.
Ọ̀ kwa i chetara na ọ dịbeghị anya ndị Juu ụfọdụ nọ na Jeruselem boro Jizọs ebubo na ọ na-emebi iwu Ụbọchị Izu Ike, chọọkwa igbu ya? Ugbu a kwa, n’ihi ihe ahụ ndị na-eso ụzọ Jizọs mere, ndị Farisii bịara kpesara Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-emebi Ụbọchị Izu Ike. Ha sịrị ya: “Lee! Ndị na-eso ụzọ gị na-eme ihe iwu na-akwadoghị ka e mee n’ụbọchị izu ike.”—Matiu 12:2.
Ndị Farisii sịrị na ịghọrọ ọka na iji aka na-agbachasị ya na-ata bụ iwe ihe ubi nakwa ịzọcha ọka. (Ọpụpụ 34:21) Otú a ha si na-akọwa ihe bụ́ ọrụ n’Ụbọchị Izu Ike mere ka Ụbọchị Izu Ike ghọọ ibu arọ. Mana, ihe e bu n’uche nye iwu ahụ bụ ka ụbọchị ahụ bụrụ ụbọchị ọṅụ nakwa ụbọchị mmadụ ga-eji eme ka okwukwe ya sikwuo ike. Jizọs ji ihe atụ abụọ gosi na otú ha si were Ụbọchị Izu Ike adịghị mma. Ọ gwara ha na Jehova Chineke ebughị n’obi ka e si otú ahụ na-akọwa iwu Ụbọchị Izu Ike ahụ o nyere.
Otu n’ime ihe atụ ndị Jizọs nyere ha bụ banyere Devid na ndị ikom ya. Otu ụbọchị mgbe agụụ gụwara ha, ha kwụsịrị n’ụlọikwuu ma were achịcha e cheburu n’ihu Chineke. Ọ na-abụ ewepụ achịcha ochie n’ihu Jehova, e were ndị ọhụrụ dochie ha. Ọ bụ naanị ndị nchụàjà kwesịrị ịta achịcha ndị ahụ e wepụrụla n’ihu Jehova. Mana, a maghị Devid na ndị ikom ya ikpe n’ihi na ha tara achịcha ndị ahụ.—Levitikọs 24:5-9; 1 Samuel 21:1-6.
N’ihe atụ nke abụọ, Jizọs sịrị ha: “Ka ọ̀ bụ na unu agụbeghị n’Iwu ahụ na n’ụbọchị izu ike, ndị nchụàjà bụ́ ndị nọ n’ụlọ nsọ, na-eme ụbọchị izu ike dị ka ihe na-adịghị nsọ ma bụrụ ndị ikpe na-amaghị?” Ihe ihe a Jizọs kwuru pụtara bụ na n’Ụbọchị Izu Ike, ndị nchụàjà na-egbu ụmụ anụmanụ e ji achụ àjà ma rụọkwa ọrụ ndị ọzọ n’ụlọ nsọ. Jizọs sịziri ha: “Ma ana m agwa unu na e nwere ihe ka ụlọ nsọ ahụ n’ebe a.”—Matiu 12:5, 6; Ọnụ Ọgụgụ 28:9.
Jizọs kwukwara ihe ọzọ e dere n’Akwụkwọ Nsọ iji mee ka ihe ọ na-ekwu doo anya. Ọ sịrị: “A sị na unu ghọtara ihe nke a pụtara, ‘Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà,’ unu agaraghị ama ndị ikpe na-amaghị ikpe.” N’ikpeazụ, ọ sịrị: “N’ihi na Nwa nke mmadụ bụ Onyenwe ụbọchị izu ike.” Jizọs na-ekwu banyere ọchịchị puku afọ ya, bụ́ nke udo ga-adị na ya.—Matiu 12:7, 8; Hosia 6:6.
O teela ụmụ mmadụ tawara ahụhụ ka ndị ohu n’aka Setan. Ime ihe ike na agha jukwara ebe niile. Oge ọchịchị Kraịst, nke bụ́ oké Ụbọchị Izu Ike, ga-adị iche. Ọ dịla anya ọ gụsiwere anyị agụụ ike izuru ike ná nsogbu anyị niile. Anyị ga-enwekwa ike izuru ike n’oge ọchịchị Kraịst.
Olee ebubo ndị Farisii boro ndị na-eso ụzọ Jizọs, gịnịkwa mere ha ji bo ha ebubo ahụ?
Olee otú Jizọs si gbazie echiche ndị Farisii nwere banyere Ụbọchị Izu Ike?
Olee otú Jizọs si bụrụ “Onyenwe Ụbọchị Izu Ike”?